သားဦး သားနှောင်း မယူကောင်း ယူကောင်း – WunYan
သားဦး သားနှောင်း မယူကောင်း ယူကောင်း
သားဦး သားနှောင်း မယူကောင်း ယူကောင်း (လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုမယ့် မြန်မာ အမျိုးကောင်း သားသမီးများအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ)
”ဦးဇော်ရှိသလားဗျို့” အော်ဟစ် အသံပေး၍ ဝင်ရောက်လာသူမှာ မောင်သန့်ဇင်ထွန်းဖြစ်သည်။ ”သြော်… မောင်သန့် ဇင်ထွန်း ပါလား။ အိမ်ကို အလည်မလာတာတောင် အတော်ကြာသွားပြီနော်။ ဒါနဲ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရော အဆင်ပြေ ရဲ့လား။ ”ဟုတ်ကဲ့။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတော့ အဆင် ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆင်မပြေတာ လေးတစ်ခု ရှိနေလို့။” မောင်သန့်ဇင်ထွန်းက ရယ်၍ပြောသည်။ ”မင်း ဒါပေမဲ့က ဘာလဲဟ၊ ပြောပြစမ်းပါအုံး။ ”ဒီလိုဦးဇော်ရေ၊ ကျွန်တော်နဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် လူငယ်တွေသဘာဝ မေတ္တာမျှနေတယ်။ အဲဒါဒုက္ခ အကြီးအကျယ်တွေ့နေတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။
”ဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးရောက်နေတာလဲကွ။ ”ကျွန်တော့် မိသားစုထဲမှာ ကျွန်တော်ကအငယ် ဆုံးမ ဟုတ်လား။ အဲ..ကျွန်တော့်ချစ်သူ ကတော့ သူတို့မိသားစုထဲမှာ အကြီးဆုံးလေ။ အဲဒီတော့ သားဦးနဲ့ သားနှောင်းဖြစ် မနေဘူးလား။”အင်း…လုပ်စမ်းပါအုံး။ အဲဒါနဲ့ဘာဆိုင်လို့ လဲ။ ”ဆိုင်တာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတစ် ယောက်ကပြောတယ်။ သားဦး သားနှောင်းမယူ ကောင်းဘူးတဲ့။ ယူရင်ဇနီးမောင်နှံ ကွဲတတ်တယ်တဲ့။ မကွဲဘူးဆိုရင်လဲ စီးပွားရေး မဖြစ်ထွန်းဘူးတဲ့။
အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော့် အနေနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ခက်နေတယ်။ ဒုက္ခ အကြီးအကျယ် တွေ့နေတယ် ဆိုပါတော့ ဗျာ။”အယူသီးတာတွေ ကြုံ့နေရတဲ့ ဒုက္ခမျိုးတွေပေါ့…. ဘုရားဟောကျမ်းဂန်တွေထဲမှာ သားဦး သားနှောင်း မယူကောင်းလို့ မပါပါဘူး။ လြူကီးချင်းရော အဆင်ပြေရဲ့လား။ ”လူကြီးချင်းကတော့ အဆင်ပြေ ပါတယ်။ ”လူငယ်ချင်းလဲမေတ္တာမျှ၊ လြူကီးချင်းလဲ အဆင် ပြေပါလျက်နဲ့ သားဦးသားနှောင်း ဖြစ်လို့ မယူ လိုက်ဘူး ဆိုရင် မိုက်မဲရာကျတာ ပေါ့ကွာ။
သေသေချာချာ စဉ်းစားပါအုံး။ တို့ရွာက ဦးမြင့်မောင်ကို မင်းသိတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီဦးမြင့်မောင်က ဘုန်းကြီးလူထွက်ကွ။ စာချတန်း(ဓမ္မာစရိယ)ရောက်တဲ့အထိ စာတွေသင်ခဲ့ဖူး တယ။် ရဟ]န်းဘောင်မှာ ငြီးငွေ့လို လူထွက်လိုက်တာလေလေ။ လူထွက်ပြီးတဲ့နောက် သုံးနှစ်လောက်ကြာတဲ့ အခါမှာ တို့ရွာ အနောက်ပိုင်းက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ မေတ္တာမျှကြတယ်။ ”ဦးမြင့်မောင်က အကြီးဆုံးသား။ ဦးမြင့်မောင် နဲ့ကြိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးက အငယ်ဆုံး သမီး။
အဲ…သားဦးသားနှောင်း ဖြစ်နေပေမယ့် ဦးမြင့်မောင်က ဘုန်းကြီးလူထွက်ဆိုတော့ အယူသီးတာတွေ လက်မခံဘူး။ နောက်ဆုံးမှာ သူတို့နှစ်ယောက် လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်။။”အခုဆိုရင် သူတို့သားလေးတောင် တော်တော် အရွယ်ရောက်နေပြီ။ စီးပွားရေးလဲ အရင်ကထက် ပိုပြီး ဖြစ်ထွန်းလာတယ။် ဒါကြောင့် မင်းလဲ အယူမသီးစေချင်ဘူး။ သေသေချာချာ စဉ်းစားပေါ့ကွာ။” စာရေးသူ အနေဖြင့် မောင်သန့်ဇင်ထွန်းကို အယူမသီးရန် အကျိုးအကြောင်းပြောပြ နားချခဲ့ရသည်။
”မောင်သန့်ဇင်ထွန်းရေ .. သားဦးသားနှောင်း ဆိုတဲ့ သဘောက ဒီလိုကွဲ့။ မိသားစုတိုင်းမှာ သားဦး၊ သမီးဦးမွေးလာရင် ချစ်တဲ့ စိတ်နဲ့ အလိုလိုက်၊ လိုအပ်တာ ဖြည့်ဆည်း ပေးကြတယ် မဟုတ်လား။ သားနှောင်းလို့ ခေါ်တဲ့ အငယ်ဆုံး သားသမီးကိုလဲ ဒီလိုပဲကွဲ့။ အငယ်ဆုံးလေး၊ အထွေးဆုံးလေးနဲ့ အလိုလိုက် အချစ်ပိုကြတာပေါ့ကွယ်။ အဲဒီလို အလိုလိုက်ခံရတဲ့ သားဦး၊ သားနှောင်းပေါင်းဖက်ရင် မိဘတွေ အပေါ် နွဲ့ဆိုး ဆိုးချင်တိုင်း ဆိုးသလိုဖြစ်နေရင် အိမ်ထောင်ရေး မသာယာ တကျက်ကျက်ရန်ဖြစ် နေမှာစိုးလို့ပါ ကွယ်။”
စာရေးသူ ရှင်းပြသည်ကို မောင်သန့်ဇင်ထွန်း နားလည်သဘောပေါက်သွားပုံရသည်။ သူ့အိမ် ထောင်ရေးအတွက် လည်း ဆုးံမစကား ပြော မသိလို ဖြစ်သွားသည့်အတွက် စာရေးသူသည်လည်း ကျေနပ် ပီတိ ဖြစ်မိသည်။ စာရေးသူတို့ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် လက်ထပ်မင်္ဂလာ ပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အယူသီးမှုများစွာ ရှိသည်။ ဥပမာဆိုရသော် ဦး-သာ၊ စိန်-ပန်း၊ ဒန်း-လှ၊ ကို-ရှာ ဟူသော စကားအရ တနင်္ဂနွေနှင့် သောကြာ၊ အဂါင်္နှင့် ကြာသပတေး၊ စနေနှင့် ဗုဒ္ဓဟူး၊ တနင်္လာနှင့် ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများသည် အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ် အချက်များကို မလိုက်နာကြတော့ဘဲ အယူသီး မှုများ နောက်သို့သာ လိုက်ပါနေကြတော့သည်။
ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အနေဖြင့် အယူမသီးကြစေရန် နမ္မား ဆရာတော်ကြီး၏”သစ္စာသုံးခိုင် နိဗ္ဗာန်တိုင်” တရားတော်ကို အနည်းငယ်ထုတ်နုတ်တင် ပြပါမည်။ ”ရက်ရာဇာနေ့မှာ ငရုတ်သီးစားရင် မစပ်ဘူးလား။” စပ်ပါတယ်ဘုရား။” ရက်ရာဇာနေ့မှာ လုပ်သော အကုသိုလ်သည် မကောင်းကျိုးကို မပေးဘဲ နေပါ့မလား။” မနေပါဘုရား။” ကံမကောင်းသော သူသည် ရက်ရာဇာနေ့မှာ အိမ်တိုင်ထူခြင်းကြောင့် ချမ်းသာပါ့မလား။” ”မချမ်းသာပါ ဘုရား။
”မောင်စိန်တို့ရွာ အိမ်ခြေဘယ်လောက်ရှိလဲ။” တစ်ရာရှိပါတယ်ဘုရား။” အဲဒီအိမ်ခြေ တစ်ရာမှာ ရက်မရွေးဘဲ ဆောက်တဲ့ အိမ်ရှိပါရဲ့လား။” မပါပါဘုရား။” ရက်ရွေးပြီးဆောက်တဲ့ အိမ်တွေဟာ ချမ်းသာတဲ့ အိမ်တွေချည်း ပဲလား။” မွဲတဲ့အိမ်တွေပဲ များပါတယ်ဘုရား။” ဒီလိုဆိုရင် ရက်ကောင်းတွေက ကောင်းကျုိးပေး နိုင်သေးရဲ့လား။” မပေးနိုင်ပါ ဘုရား။” ရက်မရွေးဘဲ မင်္ဂလာဆောင် တဲ့ ဇနီးမောင်နှံရှိရဲ့လား။” မရှိပါဘုရား။”
” ဇနီးမောင်နှံတိုင်း မကွဲမကွာဘဲနဲ့ ချမ်းသာတာချည်း ပဲလား။” မဟုတ်ပါဘုရား။” ရက်ကောင်းတွေကို အားကိုးရတာ အလကားပေါ့။” အလကားပါဘုရား။” ကုသိုလ်ကို အားကိုးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာကွဲ့ မောင်စိန်ရဲ့။” ”မှန်ပါဘုရား။ ” နမ္မား ဆရာတြော်ကီး၏ တရားတော်ကို နှလုံးမူပြီး အရာရာတွင် ဝိဘဇ္ဇဥာဏ်ဖြင့် ဆင်ခြင်နိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်၍ တင်ပြလိုက် ရပါသည်။
ရတနာပုံသတင်းစာမှ စာရေးဆရာ ဇော်ဦး(မြန်မာစာ) ရဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ… ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ လူမျိုးများရဲ့ အယူသီးမှုတွေကို တင်ဆက်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးဖြစ်လို့…ကျွန်တော် Facebook မှာ တင်ဆက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးလေး…ဖြစ်လို့ ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ….
(ဆရာဆောင်းပါးလေးကို မဖတ်လိုက်ရတဲ့ လူတွေ…အယူသီးနေတဲ့လူတွေ ဖတ်နိုင်အောင် တင်ဆက် ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..)
မြန်မာတို့ သိသင့်တဲ့ သမိုင်းထဲကဗမာ့။။
သားဦး သားနှောငျး မယူကောငျး ယူကောငျး (လကျထပျမင်ျဂလာပွုမယျ့ မွနျမာ အမြိုးကောငျး သားသမီးမြားအတှကျ အရမျးကောငျးတဲ့ ဆောငျးပါးလေးပါ)
”ဦးဇျောရှိသလားဗြို့” အျောဟဈ အသံပေး၍ ဝငျရောကျလာသူမှာ မောငျသနျ့ဇငျထှနျးဖွဈသညျ။ ”သွျော… မောငျသနျ့ ဇငျထှနျး ပါလား။ အိမျကို အလညျမလာတာတောငျ အတျောကွာသှားပွီနျော။ ဒါနဲ့စီးပှားရေး လုပျငနျးရော အဆငျပွေ ရဲ့လား။ ”ဟုတျကဲ့။ စီးပှားရေးလုပျငနျးကတော့ အဆငျ ပွပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဆငျမပွတော လေးတဈခု ရှိနလေို့။” မောငျသနျ့ဇငျထှနျးက ရယျ၍ပွောသညျ။ ”မငျး ဒါပမေဲ့က ဘာလဲဟ၊ ပွောပွစမျးပါအုံး။ ”ဒီလိုဦးဇျောရေ၊ ကြှနျတျောနဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျ လူငယျတှသေဘာဝ မတ်ေတာမြှနတေယျ။ အဲဒါဒုက်ခ အကွီးအကယျြတှနေ့တေယျ ဆိုပါတော့ဗြာ။
”ဘယျလိုဒုက်ခမြိုးရောကျနတောလဲကှ။ ”ကြှနျတေျာ့ မိသားစုထဲမှာ ကြှနျတျောကအငယျ ဆုံးမ ဟုတျလား။ အဲ..ကြှနျတေျာ့ခဈြသူ ကတော့ သူတို့မိသားစုထဲမှာ အကွီးဆုံးလေ။ အဲဒီတော့ သားဦးနဲ့ သားနှောငျးဖွဈ မနဘေူးလား။”အငျး…လုပျစမျးပါအုံး။ အဲဒါနဲ့ဘာဆိုငျလို့ လဲ။ ”ဆိုငျတာပေါ့ဗြာ။ ကြှနျတေျာ့မိတျဆှတေဈ ယောကျကပွောတယျ။ သားဦး သားနှောငျးမယူ ကောငျးဘူးတဲ့။ ယူရငျဇနီးမောငျနှံ ကှဲတတျတယျတဲ့။ မကှဲဘူးဆိုရငျလဲ စီးပှားရေး မဖွဈထှနျးဘူးတဲ့။
အဲဒါကွောငျ့ ကြှနျတေျာ့ အနနေဲ့ လကျထပျဖို့ခကျနတေယျ။ ဒုက်ခ အကွီးအကယျြ တှနေ့တေယျ ဆိုပါတော့ ဗြာ။”အယူသီးတာတှေ ကွုံ့နရေတဲ့ ဒုက်ခမြိုးတှပေေါ့…. ဘုရားဟောကမျြးဂနျတှထေဲမှာ သားဦး သားနှောငျး မယူကောငျးလို့ မပါပါဘူး။ လွူကီးခငျြးရော အဆငျပွရေဲ့လား။ ”လူကွီးခငျြးကတော့ အဆငျပွေ ပါတယျ။ ”လူငယျခငျြးလဲမတ်ေတာမြှ၊ လွူကီးခငျြးလဲ အဆငျ ပွပေါလကျြနဲ့ သားဦးသားနှောငျး ဖွဈလို့ မယူ လိုကျဘူး ဆိုရငျ မိုကျမဲရာကတြာ ပေါ့ကှာ။
သသေခြောခြာ စဉျးစားပါအုံး။ တို့ရှာက ဦးမွငျ့မောငျကို မငျးသိတယျမဟုတျလား။ အဲဒီဦးမွငျ့မောငျက ဘုနျးကွီးလူထှကျကှ။ စာခတြနျး(ဓမ်မာစရိယ)ရောကျတဲ့အထိ စာတှသေငျခဲ့ဖူး တယ။ျ ရဟ]နျးဘောငျမှာ ငွီးငှလေို့ လူထှကျလိုကျတာလလေေ။ လူထှကျပွီးတဲ့နောကျ သုံးနှဈလောကျကွာတဲ့ အခါမှာ တို့ရှာ အနောကျပိုငျးက အမြိုးသမီးတဈယောကျနဲ့ မတ်ေတာမြှကွတယျ။ ”ဦးမွငျ့မောငျက အကွီးဆုံးသား။ ဦးမွငျ့မောငျ နဲ့ကွိုကျတဲ့ အမြိုးသမီးက အငယျဆုံး သမီး။
အဲ…သားဦးသားနှောငျး ဖွဈနပေမေယျ့ ဦးမွငျ့မောငျက ဘုနျးကွီးလူထှကျဆိုတော့ အယူသီးတာတှေ လကျမခံဘူး။ နောကျဆုံးမှာ သူတို့နှဈယောကျ လကျထပျလိုကျကွတယျ။။”အခုဆိုရငျ သူတို့သားလေးတောငျ တျောတျော အရှယျရောကျနပွေီ။ စီးပှားရေးလဲ အရငျကထကျ ပိုပွီး ဖွဈထှနျးလာတယ။ျ ဒါကွောငျ့ မငျးလဲ အယူမသီးစခေငျြဘူး။ သသေခြောခြာ စဉျးစားပေါ့ကှာ။” စာရေးသူ အနဖွေငျ့ မောငျသနျ့ဇငျထှနျးကို အယူမသီးရနျ အကြိုးအကွောငျးပွောပွ နားခခြဲ့ရသညျ။
”မောငျသနျ့ဇငျထှနျးရေ .. သားဦးသားနှောငျး ဆိုတဲ့ သဘောက ဒီလိုကှဲ့။ မိသားစုတိုငျးမှာ သားဦး၊ သမီးဦးမှေးလာရငျ ခဈြတဲ့ စိတျနဲ့ အလိုလိုကျ၊ လိုအပျတာ ဖွညျ့ဆညျး ပေးကွတယျ မဟုတျလား။ သားနှောငျးလို့ ချေါတဲ့ အငယျဆုံး သားသမီးကိုလဲ ဒီလိုပဲကှဲ့။ အငယျဆုံးလေး၊ အထှေးဆုံးလေးနဲ့ အလိုလိုကျ အခဈြပိုကွတာပေါ့ကှယျ။ အဲဒီလို အလိုလိုကျခံရတဲ့ သားဦး၊ သားနှောငျးပေါငျးဖကျရငျ မိဘတှေ အပျေါ နှဲ့ဆိုး ဆိုးခငျြတိုငျး ဆိုးသလိုဖွဈနရေငျ အိမျထောငျရေး မသာယာ တကကျြကကျြရနျဖွဈ နမှောစိုးလို့ပါ ကှယျ။”
စာရေးသူ ရှငျးပွသညျကို မောငျသနျ့ဇငျထှနျး နားလညျသဘောပေါကျသှားပုံရသညျ။ သူ့အိမျ ထောငျရေးအတှကျ လညျး ဆုးံမစကား ပွော မသိလို ဖွဈသှားသညျ့အတှကျ စာရေးသူသညျလညျး ကနြေပျ ပီတိ ဖွဈမိသညျ။ စာရေးသူတို့ မွနျမာနိုငျငံ တှငျ လကျထပျမင်ျဂလာ ပွုခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ အယူသီးမှုမြားစှာ ရှိသညျ။ ဥပမာဆိုရသျော ဦး-သာ၊ စိနျ-ပနျး၊ ဒနျး-လှ၊ ကို-ရှာ ဟူသော စကားအရ တနင်ျဂနှနှေငျ့ သောကွာ၊ အဂါင်္နှငျ့ ကွာသပတေး၊ စနနှေငျ့ ဗုဒ်ဓဟူး၊ တနင်ျလာနှငျ့ ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးမြားသညျ အိမျထောငျဖကျအဖွဈ ရှေးခယျြ အခကျြမြားကို မလိုကျနာကွတော့ဘဲ အယူသီး မှုမြား နောကျသို့သာ လိုကျပါနကွေတော့သညျ။
ထို့ကွောငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမြား အနဖွေငျ့ အယူမသီးကွစရေနျ နမ်မား ဆရာတျောကွီး၏”သစ်စာသုံးခိုငျ နိဗ်ဗာနျတိုငျ” တရားတျောကို အနညျးငယျထုတျနုတျတငျ ပွပါမညျ။ ”ရကျရာဇာနမှေ့ာ ငရုတျသီးစားရငျ မစပျဘူးလား။” စပျပါတယျဘုရား။” ရကျရာဇာနမှေ့ာ လုပျသော အကုသိုလျသညျ မကောငျးကြိုးကို မပေးဘဲ နပေါ့မလား။” မနပေါဘုရား။” ကံမကောငျးသော သူသညျ ရကျရာဇာနမှေ့ာ အိမျတိုငျထူခွငျးကွောငျ့ ခမျြးသာပါ့မလား။” ”မခမျြးသာပါ ဘုရား။
”မောငျစိနျတို့ရှာ အိမျခွဘေယျလောကျရှိလဲ။” တဈရာရှိပါတယျဘုရား။” အဲဒီအိမျခွေ တဈရာမှာ ရကျမရှေးဘဲ ဆောကျတဲ့ အိမျရှိပါရဲ့လား။” မပါပါဘုရား။” ရကျရှေးပွီးဆောကျတဲ့ အိမျတှဟော ခမျြးသာတဲ့ အိမျတှခေညျြး ပဲလား။” မှဲတဲ့အိမျတှပေဲ မြားပါတယျဘုရား။” ဒီလိုဆိုရငျ ရကျကောငျးတှကေ ကောငျးကြုိးပေး နိုငျသေးရဲ့လား။” မပေးနိုငျပါ ဘုရား။” ရကျမရှေးဘဲ မင်ျဂလာဆောငျ တဲ့ ဇနီးမောငျနှံရှိရဲ့လား။” မရှိပါဘုရား။”
” ဇနီးမောငျနှံတိုငျး မကှဲမကှာဘဲနဲ့ ခမျြးသာတာခညျြး ပဲလား။” မဟုတျပါဘုရား။” ရကျကောငျးတှကေို အားကိုးရတာ အလကားပေါ့။” အလကားပါဘုရား။” ကုသိုလျကို အားကိုးမှ ဗုဒ်ဓဘာသာကှဲ့ မောငျစိနျရဲ့။” ”မှနျပါဘုရား။ ” နမ်မား ဆရာတွေျာကီး၏ တရားတျောကို နှလုံးမူပွီး အရာရာတှငျ ဝိဘဇ်ဇဉာဏျဖွငျ့ ဆငျခွငျနိုငျကွစရေနျ ရညျရှယျ၍ တငျပွလိုကျ ရပါသညျ။
ရတနာပုံသတငျးစာမှ စာရေးဆရာ ဇျောဦး(မွနျမာစာ) ရဲ့ ဆောငျးပါးလေးကို ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ခငျဗြာ… ကြှနျတျောတို့ မွနျမာ လူမြိုးမြားရဲ့ အယူသီးမှုတှကေို တငျဆကျထားတဲ့ ဆောငျးပါးလေးဖွဈလို့…ကြှနျတျော Facebook မှာ တငျဆကျပေးထားခွငျးဖွဈပါတယျ။ အရမျးကောငျးတဲ့ ဆောငျးပါးလေး…ဖွဈလို့ ပွနျလညျ တငျဆကျလိုကျတာကို ခှငျ့လှတျပါခငျဗြာ….
မွနျမာတို့ သိသငျ့တဲ့ သမိုငျးထဲကဗမာ့။။